Kante: U Wareegistaydii Chelsea Ma Ahayn Bakhtiyaanasiib
HomeEnglandKante: U Wareegistaydii Chelsea Ma Ahayn Bakhtiyaanasiib
Xidiga xulka France, wuxuu yimid Stamford Bridge isagoo ka soo guurey kooxda lagu naanayso Dacawooyinka horaantii xagaagan, waxaanu rumaysan yahay in Blues ay si dhakhso ah ugu noqon doonto figta sare ee kooxaha Yurub inta uu maamulka u hayo macalin Antonio Conte
N’Golo Kante go’aankii uu kaga tagay Leicester City ee uu ugu wareegay Chelsea ayaa ahaa mid uu isagu kaligii go’aan saday, oo aanu u arkayn inuu ahaa jar iska xoornimo ama mid khasaariyey riyadiisii ka ciyaarista horyaalka naadiyada Yurub ee Champions League.
Naadiga The Blues lagu naanayso ayaa lumiyey oo ka hadhay Champions League sanadkan kadib markii ay mashaqo iyo hoos u dhac weyn kala kulmeen xili ciyaareedkii 2015-16, halka kooxda Leicester ay ugu soo baxday wacdarihii iyo mucjisadii ay Premier League sanadkan ka dhigtay kuna qaaday horyaalka Ingiriiska.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, Kante wuxuu kalsooni buuxda ku qabaa in Chelsea ay markale salaanka iyo jidka ku soo noqon doonto waliba si dhakhso ah maadaama ay heshay tabobare Antonio Conte.
“Bakhtiyaanasiib ma ahayn. Ani ahaaan waa talaabo cusub oo aan qaaday. Inaan la sii joogo Leicester oo aan Champions Leaguna ciyaaro waxay ahaan lahayd wax fiican iyo talaabo horumar leh, laakiin ku biirista Chelsea lafteedu waa talaabo aad u wanaagsan,”Ayuu 25 jirka difaaca hufan ahi ku yidhi waraysi uu siiyey majalada Daily Mirror.
“Haa Dabcan, Waligay kama ciyaarin horyaalka Champions League. Laakiin qof kastaa wuu garanayaa in Chelsea tahay koox weyn oo aan mudo dheer ka maqnaanayn, waxaanan ku rajo weynahay inaan sanadka dambeba ka qayb gallo.
“Inaan Champions League ka ciyaaro aniga waxay ii ahaan lahayd riyo igu weyn. Markaad tahay ciyaaryahan, ee ay fursadaas oo kale ku soo marto isla markaana aad hesho fursad aad kaga qayb galli karto, waa xaalad aad u wanaagsan.
“Laakiin sidaan horeba idiin idhi, waxaan rajaynayaa inaan xili ciyaareedka dambeba ciyaari doono.”
Ingiriiska Oo Kalsoonidii Kala Noqday Platini Iyo Yurub Oo Jaho-wareersan
16/10/2015 Abdiwahab Ahmed
James DeGale vs Caleb Truax – FULL FIGHT HD
Mo Farah oo La Daba Dhigtay Markii Labaadna ka baaqday Baadhista Daroogada